Fitsarana fiarakodia Mitombo isa ny « Plaque châssis » hosoka
Kaoperativa etsy Ambodivona Mangataka ny hijanonan’izy ireo ao ambadiky ny Total
Ny toerana ao ambadiky ny Total etsy Ambodivona no toerana efa mahazatra ireo kaoperativa izay tadiavina hafindra toerana eny Andohatapenaka, ny 20 septambra ho avy izao.
Lalana ratsin’Antananarivo renivohitra Ho vita tsara ao anatin’ny 10 volana
Ao anatin’ny folo volana, tsy hisy intsony ny lalana ratsy eto Antananarivo Renivohitra, hoy atoa Rahaingoson Harifidy, talen’n y serasera eo anivon’ny ministeran’ny fananjariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy.
Madagasikara Tena mila fanavaozana ny fifamoivoizana
Misy ny fanavaozana apetraka amin’ny tontolon’ny fitaterana eto Madagasikara ary hojerena avokoa na ny fitaterana ana habakabaka, na ny an-dranomasina hatramin’ny taksibe miasa eto amin’ny firenena.
Ankoatran’ny taratasy hosoka maro efa saron’ny teo anivon’ny Foibe Fitsarana fiarakodia (DGSR) dia tsikaritra indray tato ato ny fisian’ny takelaby na ny plaque châssis hosoka.
Nanambara ny teo anivon’ny DGSR fa taorian’ny fisavana sy fanamarinana natao dia hita ho tsy mitovy tamin’ny ara-dalàna ny takelaby tratra tamina fiara iray. Nisy ny tambajotra mpanao hosoka tratra araka izany ary efa nogiazana eny amin’ny zandarimariam-pirenena ny fiara. Nanamafy sy nampitandrina ny foibe fitsarana fiarakodia fa izy irery ihany no manana alalana manolo sy afaka manao ny « Duplicata » ny « plaque –chassis » raha toa ka misy fahaverezany sy fahasimbany. Hisy ihany koa ny fanatanterahana fitsirihana ara-teknika ( Visite Technique Spéciale) amin’izao fialan-tsasatra sy ankatoky ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina izao. Araka izany dia hisokatra ny ivon-toerana fitsarana fiarakodia rehetra ny 03 hatramin’ny 24 aogositra manomboka amin’ny 7 ora hatramin’ny 3 ora tolakandro.